Marwo Canab Axmed Ciise oo ku guuleesatay Gudoomiye kuxigeenka Labaad ee Baarlamaanka Hirshabelle +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Marwo Canab Axmed Ciise oo ku guuleesatay Gudoomiye kuxigeenka Labaad ee Baarlamaanka Hirshabelle +Sawirro
Waxaa magaalada Jowhar lagu soo gabo gabeeyay Doorashada Gudoonka Baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle, waxaana la doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa kuxigeen.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle ayaa noqotay Marwo Canab Axmed Ciise , oo tartan adag la gashay labo Musharax kale oo la tartamayay.
Marwo Canab Axmed Ciise ayaa heshay Codad gaaraya 47-cod halka Musharxii kale ee la tartamayay Mahad Xasan Cusmaan uu isna helay 41-cod, doorashadan ayaana aheed mid aad u adag oo la isla gaaray labo wareeg maadama ay ku tartamayeen Sadex Musharax.
Magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay doorasho Taariikhi ah oo lagu dooranayay Gudoonka Baarlamaanka Hirshabelle, waxaana gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi loo doortay Cismaan Barre Maxamed halka kuxigeenka koowaad isna loo doortay Cabdi Xueen Geedi.
Maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in magaalada Jowhar lagu doorto Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle, waxaana dooarshadaasi ku tartami doona musharixiin dhoor ah oo saameyn badan ku leh labada gobol ee mamaulka loo dhisayo.